July (20) June (24) May (30) April (19) March (20) February (28) January (20) Beeraha iyo Xoolaha QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA">QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA Halkan ka dhegeso xubinta qiimaha xoolaha oo laga soo kal adiray magaalooyinka Baardheere iyo Afgooye. Waxaa soo jeedinaysa Fowzia Cumar....
29 MAR 2017 QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA">Akhri
Howlgal boqollaal kun oo neef lagu tallaalayo oo ka billowday Shabeellaha Dhexe (ERGO) - Koox dhaqaatiir ah oo ka howlgasha gobollada Shabeellaha dhexe, Hiiraan iyo Galgaduud ayaa toddobaadkii hore billaabay howlgal ay ku tallaalayaan xoolaha, isla markaana ay uga daweynayaa...
Halkan kala soco xogta qiimaha xoolaha ee Muqdisho, Buuhoodle iyo Widhwidh (ERGO) - Abaaraha iyo hayaanka ka jira gobollada dalka qaar ayaa sababay in aan suuqyada la keenin xoolo iib gala. Taas ayaa sidoo kale hoos u dhigtay qiimihii xoolaha lagu iibsan jiray seyladaha...
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Wararka qiimaha xoolaha maanta waxaan ku eegaynaa sayladaha degmada Laascaanood ee gobolka Sool iyo Jowhar oo ah gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaa soo kala diray Faarax Dubad iyo Maryan Sheekh Cabdi. W...
24 MAR 2017 Akhri
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Qiimaha xoolaha ee sayladaha Gaalkacayo, Garoowe iyo Baargaal, waxaa soo kala diray Jibriil Cismaan Cilmi iyo Cabdiraxmaan Maxamed Xaaji.
Waxaa soo jeedinaya Maxamed Xasan. ...
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Halkan ka dhegeyso xubinta qiimaha xoolaha nool ee dalka oo aan maanta ku eegeyno sayladaha Afgooye iyo Salagle oo Shabeellaha hoose iyo Jubbada dhexe ah. Faadumo Macallin Abuukar ayaa soo jeedineysa....
Dhoobley: Haween barakacayaal ah oo ka faa'ideysanaya nafaqeyn iyo quudin Haween gaaraya 210 qof oo nafaqo-darro la ildaran ayaa ka faa’ideysanaya howlo samafal oo nafaqo-celin iyo quudin isugu jira oo ay u sameyso hay’adda Waamo ee gargaarka ka shaqeysa. Haween...
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Waxaan idinku haynaa sayladaha Boosaaso iyo Qardho oo gobolka Bari ah iyo Beledweyne iyo Buuloburde oo gobolka Hiiraan ah , waxaa soo kala diray Faadumo Yuusuf Taxadar iyo Jamaal Cali yare. Waxaana so...
QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA Halkan ka dhegeyso xubinta qiimaha xoolaha oo laga soo diray seyladaha Gaalkacyo, Mandiiradley iyo Burtinle.
Waxaa soo jeedinaysa Fowzia Cumar....
17 MAR 2017 Akhri
Wareysi ku saabsan badbaadada xoolaha ee xilliyada abaaraha (ERGO) - Reer miyi badan ayaa ka cabanaya xilligan lagu jiro abaaraha in xoolo badan ay cudurro uga dhinteen. Cudurradaasi waxa ay noqon karaan iyo sida looga hortagi karo ayaan ka wareysannay Dr...
Xoolo dhogorta iska cunay markii ay waayeen wax kale oo ay cunaan (ERGO) - Guddoon Xariir Axmed oo ah 27 jir ku nool deegaanka Belligubadle ee Somaliland ayaa sheegtay in toddobaadkii hore ay is-cuneen labo neef oo ido ah oo meel ku wada xareysnaa, kaddib marki...
QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA Halkan ka dhegeyso xubinta qiimaha xoolaha oo laga soo kala diray magaalooyinka Muqdisho iyo Buhoodle. Waxaa soo jeedinaysa Fowzia Cumar ...
QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA Dhegeyso xubinta qiimaha xoolaha oo laga soo diray degmooyinka Beledwayne iyo Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan waxaa soo jeedinaysa Faadumo Macallin Abuukar....
QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA ...
Hargeysa: Xoolo is cunay marki ay daaq waayeen Xalaadda abaareed ee ka sii daraysa ayaa keentay in xooluhu is cunaan markii ay waayeen wax ay cunaan. Deegaanka Baligubadle oo 62 km dhanka koonfur kaga beegan Magaalada Hargeysa ayaa lagu soo w...
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Sayladaha xoolaha ee degmooyina Baardheere iyo Afgooye, waxaa inoo soo kala diray weriyayaasheena Axmed Cumar Saalixi iyo Maxamed Deeq Cabdi. Waxaa soo jeedinaysa Faadumo Macalin....
08 MAR 2017 Akhri
QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA Dhegeyso xubinta qiimaha xoolaha oo laga soo diray magaalada Buhoodle. Waxaa soo jeedinaya Cabdiraxmaan taysiir ...
07 MAR 2017 Akhri
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Wararka qiimaha xoolaha ee sayladaha Jalalaqsi iyo Beledweyne oo ka tirsan gobolka Hiiraan, waxaana soo diray Jamaal Cali Yare. Waxaa soo jeedinaysa Fowsia Cumar Barre...
06 MAR 2017 Akhri
Waraysi ku saabsan xaladda xoolaha gobollaga Bay iyo Bakool ku sugan yihiin wakhtigaan Dr. Cali Roble Maxamuud waa madaxa ururka takhaatiirta lixda gobol ee Jubbooyinka iyo Koonfur galbeed, wuxuu Maxamed Xasan oo ka tirsan Ergo uga waramay xaaladaha xoolo dhaqatada iyo xoolahoodu ku sug...
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Halkan ka dhegeyso xubinta qiimaha xoolaha nool ee suuqyada Soomaaliya. Waxaa laga soo kala diray magaalooyinka Baargaal, Gaalkacyo iyo Ceel-guul ee gobollada Nugaal iyo Mudug. Fowsiya Cumar Barre aya...
02 MAR 2017 Akhri